အမေရိကား မှမြန်မာများ သတိထားပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အမေရိကား မှမြန်မာများ သတိထားပါ
အမေရိကား မှမြန်မာများ သတိထားပါ
Posted by နေ ဘုန်းလျံ on Dec 22, 2010 in News | 13 comments
Posted by မြန်မာ ၀ီကီလိခ်..
ဂေဇက်ရဲ့ စည်းအရ သူတပါးရေးထားသောစာမူများမတင်ရဟု ရှိထားသောလည်း အမေရိကား ရှိမြန်မာပြည်သူတွေ၏ အကျိုး အတွက် တင်ပြလိုက်ရပါတယ် ..။
သတိထားစရာများကို တင်ပေးလို့ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။
အဲ ဒီ လို လုပ် ခံ ရ ရင် သက် ဆိုင် ရာ နိုင် ငံ ရဲ့သံ ရုံး ကို တိုင် လို့မ ရ ဘူး လား ဟင်။ဥ ပ မာ အ မေ ရိ ကန် နိုင် ငံ သား ခံယူ ထား တဲ့သူု ဆို အ မေ ရိ ကန် သံ ရုံး ကို ပေါ့ ။
အဲသလိုတကယ်ဆိုရင် သူတို့(ရဲက) ဖွင့်မချခင် ဒီဘက်က အရင်ဖွင့်ချသွားမှာပေါ့။
မြန်မာတွေမှာ အဲသလို မဟုတ်က ဟုတ်က တွေနဲ့ ကိုယ့်အမြီးကိုယ်ပြန်ကိုက်နေကြတယ်။
သူငယ်ချင်းများအားလုံးကူညီစေချင်ပါသည်။ကျွန်တော်စာတင်မလို.လာတိုင်းအမြဲလိုလို newpost ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ.
http;//www.man…n/post-new.php error ဆိုပြီးဘာမှပေါ်မလာတော.လို.ပါအဲဒီနေ.မှာပဲသူများတွေတင်တော.ရတာတွေ.ရပါသည်
ကိုတင်မိုသီရဲ့ မန့်ဟာ ဘာကြောင့် ဖုံးကွယ်မှူ့ဖြစ်နေရတာလဲအယ်ဒီတာရေ…?????????????????????????
ဘလက်ခ်မေးလ်လုပ်တာမှာ.. လုပ်မဲ့သူသိသိကြီးနဲ့ ကြောက်ရမဲ့ပုံစံ သတင်းရေးထားတာတော့ ..မဟုတ်သေးဘူး..။
အမေရိကန်တွေပဲနော..။ လုပ်ခံရသူအရေအတွက် ..စာရင်းက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇ၀တ်တရားရုံးမှာ … မှတ်တမ်းသွားဖြစ်မှာပဲ..။ ဘလက်ခ်မေးလ်က .. ရာဇ၀တ်မှုပဲ မဟုတ်လား..။
( ပြောရရင်တော့.. ဒီသတင်းမဟုတ်သေးဘူးလို့ .. ပြောရမှာပါ..။ မျက်စိရှေ့ တွင်.. ပြန်နေသူတွေ ..ရာနဲ့ချီတွေ့နေရလို့ ..ဟင်း..ဟင်း..။)